Ungayisebenzisa kanjani i-carbide lukathayela wephepha iSlits Knives ngokufanele?
1: Ukusebenza okulungile kokulungisa i-carbide yindilinga eyindilinga kumnikazi: Qiniseka ukuthi i-carbide slitter blitter blade ihleli izinzile, ummese onqenqemeni awukwazi ukuya kwesobunxele noma kwesokudla noma weqe ubheke phezulu naphansi ngesikhathi sokusebenza. 2: Idivayisi yokulola imimese: Ukulola imimese kungasethwa ngesandla noma ngokwezifiso. I-ma ...
IZWEIMENTOOL Xiamen International Stone Fair Blog
UZweimentool ubambe iqhaza eXiamen International Stone Fair ngempumelelo enkulu Ngo-May 18, 2021, inkampani yethu yathatha imikhiqizo yethu ephezulu yokujuba amashubhu nezinsimbi zokusika i-waterjet ukuze ibambe iqhaza eChina Xiamen International Stone Fair. Inkampani yethu i-3 embukisweni hal ...
I-Zigong Xinhua Industrial Co., Ltd. yaba ngumqondisi omusha we-Zigong
I-Cemented Carbide Industry Association, ibambe umhlangano wobuchwepheshe bokukhiqiza i-carbide obusimeme, futhi yahola ekwakheni isisekelo sokukhiqiza ibha ye-carbide ngesamente Ngo-9 ekuseni ngoMeyi 8, 2021, eHuidong Hotel eZigong City, 18th Cemented Carbide Production and Technologi .. .
Inkampani yethu izobamba iqhaza eChina Xiamen International yama-21
I-Stone Fair izobanjelwa eXiamen, eFujian, eChina kusuka ngoMeyi 18 kuya ku-21, 2021 I-Xiamen International Stone Fair izobanjelwa eXiamen Convention and Exhibition Center kusuka ngoMeyi 18 kuya ku-21, 2021. Njengombukiso omkhulu wamatshe namatshe wokulungisa amatshe waseChina ...
Ukuvulwa okukhulu kweChengdu International Industry Fair
Kusukela ngo-Ephreli 22 kuya ku-24, 2021, umbukiso waminyaka yonke weChengdu Industrial Fair wavulwa kahle eWestern China International Expo City eChengdu, esifundazweni saseSichuan. Lo mbukiso wumbukiso wamazwe omhlaba oholwa yiHannover Milano Exhibition (Shanghai) Co., Ltd., futhi kuyi-al ...